'सभापति देउवाका गुण्डाले हामीलाई कार्यालयमै पिटे'
नेविसंघ र पार्टीको भागबण्डा खसी काटेर बाँडेजस्तो गरेर लगाउन पाएपछि नेताहरु सबै मिलिहाले । तर हामी विधानसम्मत कुराहरुमा हामी मिलेका थिएनौं । नमिलेपछि आज केन्द्रीय समिति बस्ने दिन आज ठ्याक्कै ४१औं दिन हो । ४१ दिनको दिन आमरण अनशन बसियो । नेविसंघको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी आमरण अनशन बस्नुभयो । म बस्ने कुरा थियो । ३२ मुनिकै बसौं दाई भन्न थाले । आन्दोलन पनि ३२ मुनिकाले गरौं भने । मैले चाहिँ म बस्दा ग्रेभिटी हुन्छ भनेको थिएँ ।
त्यहाँ शेरबहादुर दाई आउनुभयो । उहाँ आएपछि नारा जुलुस लाग्यो । नेविसंघ जिन्दावाद, विधान कार्यान्वयन गर भनेर । चुल्ठे, मुन्द्रे, हुक्के, बैठके, चिलिमेहरु आएर अनशनकारीमाथि कुट्ने काम गरियो । शेरबहादुर देउवासँग बोल्ने, उहाँलाई हेर्ने तेरो हैसियत भनेर हात हाले । शेरबहादुर देउवा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता, उहाँलाई हेर्न हुँदैन रहेछ । उहाँसँग बोल्न हुँदैन रहेछ ।
आक्रमणमा परी तीनजना घाइते भएका छन् । स्टार हस्पिटलमा छन् । मलाई पनि पिटे । पिटेपछि एकजना अछामकी बहिनीले छेकिन् । दाईलाई नपिट भन्दै । त्यो बहिनीलाई गमलाले पनि हान्यो, हेलमेटले पनि हान्यो । लात्ताले पनि हान्यो । भिडियो नै छ । ती बहिनी पनि हस्पिटलाइज भएर बसेकी छिन् ।
विद्यार्थी होइन । गुण्डाले पिटेका हुन् । हामीसँग भिडियो नै छ । सभापति देउवाका गुण्डाहरुले हाने । विद्यार्थीले होइन । पिट्ने मानिस मैले चिनेको छैन । तर, हामीसँग भिडियो छ ।
यसबारे हामी पार्टीमा पनि लिखित जानकारी दिन्छौं । हामीलाई पार्टीबाट केही हुन्छ भन्ने लागेको छैन । हामी पुलिसलाई नै निवेदन दिन्छौं ।
यदि हाम्रो माग सुनुवाइ नगरी तदर्थ समिति गठन भयो भने हामी अहिले देशैभरी आमरण अनशन बस्छौं । ७७ वटै जिल्लाका पार्टी कार्यालयहरुमा बस्छौं । कलेजमा बस्छौं । विधान संरक्षणका लागि हामी चरणवद्ध आन्दोलनका साथ अगाडि बढ्छौं । तर, हामी विधान संशोधनका लागि लाग्छौं ।
अहिलेसम्म नेविसंघको इतिहासमा नेविसंघले दिएको विधान कार्यान्वयन भएको थियो । तर पार्टीको केन्द्रीय समितिले नेविसंघले दिएको विधान यसपाली कार्यान्वयन गरेन । विधान कार्यान्वयन नगरेपछि पार्टीले अर्को विधान दियो । पार्टीले विधान दिएपछि त्यही विधान अन्तर्गत ७० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँहरुमा नेविसंघले अधिवेशन गर्‍यो । त्यो अधिवेशन गरेपछि हामीलाई समय थपिदेऊ भनेर हामीले भन्यौं । समय चार महिना थपिदेऊ भनेर हामीले पार्टी नेतृत्वसँग भन्दा पार्टी नेतृत्वले विधानै देखाएर समय थप्न मिल्दैन, किन थप्ने ? विधानले दिएको समय थपिसक्यो भनियो । पार्टी नेतृत्वले एक वर्षसम्म नेविसंघको नेतृत्व खाली राख्यो । तर पनि नेविसंघ बनाउन सकेन ।
हामीले पार्टीले दिएको विघटन कार्यान्वयन गर्न भन्दा विघटन गरेको हकमा पार्टीले समिति बनाउन सकिने भन्ने छ । त्यो कुरा सत्य हो । पार्टीलाई तरुण दल बनाउँदा तरुण दलको मान्छे चाहियो होला, महिला संघ बनाउँदा महिला चाहियो होला । महिला संघमा पुरुषलाई बनाउन त मिलेन । दलित संघ बनाउँदा पशुपतिको भट्ट ल्याएर बनाउन त मिलेन । जनजाति संघ बनाउँदा हिमालको बाहुन क्षत्रीलाई ल्याउन मिलेन । त्यस्तै नेविसंघ बनाउँदा ३२ नाघेकाले साधारण सदस्यता लिनै मिल्दैन । ३२ नाघेकोले साधारण सदस्यता नपाएको दुई वर्ष भयो । नेविसंघको साधारण सदस्यता नलिएको मानिस नेविसंघको अध्यक्ष बनाउन मिल्छ ? नेविसंघमा भएकालाई पार्टीले जे जे बनाए पनि भो । तर नेविसंघको सदस्यता भएकालाई बनाउनुपर्‍यो ।
अर्को कुरा, नेकपासँग विधि पद्धतिको लागि नेकपासँग लड्दै गर्दा हामीले बारम्बार भनेका छौं- पद्धति, विधि र संविधानको भावनाअनुसार गर्नुपर्छ । दुई तिहाईको दम्भ नदेखाऊ भनेका छौं । त्यसैगरी हामी नेपाली कांग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छौं- दम्भको आधारको अल्पमत र बहुमतको आधारमा हामी जित्छौं र हामी हार्छौं भनेर तीन चार जना नेता मिलेर नेविसंघको गठन भागबण्डाको आधारमा खसि बोकाजस्तो भाग लगाएर गर्दन मलाई, किनकी मैले मास्तिर जितेको छु, तँलाई खुट्टा किनकी तैंले तल जितेका छस् भनेर खसीबोकाजस्तो नेविसंघको भागबण्डा गर्न आवश्यक छैन ।
नेविसंघ पद्धतिअनुसार विधिअनुसार चल्नुपर्छ । मानौं म कुनै नेतासँग छैन तर, नेविसंघको इमान्दार कार्यकर्ता हो भने त्यसको पनि नेविसंघभित्र सम्भावना हुनुपर्छ । त्यो पनि नेविसंघमा सुरक्षित हुनुपर्छ । हामी त्यसको लागि लडेको र हामी के भन्छौं भने, सबै नेता मिल्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको नाम परिवर्तन गरेर प्राकृतिक हिमालय पार्टी भनेर नाम राख्नुभयो भने हामी मान्दैनौं । पार्टी केन्द्रीय समितिले पास गरोस्, तर हामी मान्दैनौं । हामीलाई नेपाली कांग्रेस नै चाहिन्छ । त्यसकारण यसको मुलभूत आदर्श र सिद्धान्तबिना गरिएको कुनै पनि निर्णय बहुमत, अल्पमत र दुई तिहाई के के भन्ने आधारमा गरिन्छ, त्यो कुरा हामीलाई मान्य छैन ।
(सोमबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भएको झडपमा पिटाई खाएका नेता काफ्लेसँग कुराकानीमा आधारित)